1.Single ịghasa granulator nwere set nke agwakọta, na -ebuli, nri, extrusion, ikuku jụrụ oyi na ọka dị ọkụ, ikuku jụrụ oyi na otu, iji nweta akpaka na -aga n'ihu na -arụ ọrụ, dị otú ahụ otu ịghasa granulator mmepụta arụmọrụ dị elu;
Kedu ihe bụ Plastic Granulator?
Igwe na -amịpụ dabere na ntụzịaka isi na akara ahịrị etiti, a na -ekewa isi n'ime isi oblique (gụnyere Angle 120o) na isi nkuku ziri ezi. A na -etinye shei nke isi igwe na fuselage nwere ihe mkpọchi, ebu na isi igwe nọ ọdụ, a na -etinyekwa ihe nkedo na isi igwe n'ime ọdụ ụgbọ mmiri, n'ihu oche isi ebu ahụ nwere ebu. isi, etiti isi ebu na oche isi oche nwere oghere, maka site na waya isi; A na -ahazi mgbanaka nha nha nrụgide n'ihu imi maka ịha nhatanha ahụ; Ihe mejupụtara akụkụ extrusion bụ oche oche ịnwụ anwụ na uwe aka ịnwụ anwụ. Enwere ike idozi ọnọdụ nke uwe aka ịnwụ anwụ site na njigide site na nkwado iji dozie ọnọdụ nke aka uwe nwụrụ na isi anwụ, nke dị mfe ịhazigharị ịdị n'otu nke ọkpụrụkpụ nke oyi akwa extrusion. A kwadebere isi ya na ngwaọrụ kpo oku yana igwe eji atụ ihe ọkụ
2. Single screw granulator na igwekota, nri na extrusion ngalaba nwere ike họrọ dị ka onye ahịa na -eji ọkụ eletriki ma ọ bụ uzuoku ọkụ ma ọ bụ teknụzụ kpo oku okirikiri, dị ka njikwa njikwa okpomọkụ ya si dị, dị ka imepụta ihe dị iche iche si dị, ọnọdụ okpomọkụ chọrọ. abụghị otu.
3. Ngwakọta agwakọta na-anabata teknụzụ nke "ụlọ na-agwakọta ngwakọta nke nwere ihu anọ", nke nwere arụmọrụ dị elu, oriri ike dị ala, plasticization zuru oke na ikesa akwa.
4. Ngwa nri na -anabata teknụzụ pụrụ iche nke ụlọ ọrụ anyị, nke nwere ike inye aka ịgwakọta ngwakọta agwakọta na ịmanye nri nke otu ịghasa extruder iji melite arụmọrụ granulation na ịdị mma.
5. Ụgbọ ala nke ịghasa cone okpukpu abụọ na otu ịghasa na -anabata teknụzụ ntụgharị AC ugboro ugboro, nke nwere ike imeghari maka teknụzụ dị iche iche chọrọ.
6. Akụkụ ihu nke isi igwe na -anabata ngwaọrụ na -agbanwe ngwa ngwa hydraulic ngwa ngwa, na -azọpụta oge na mbọ, yana nchedo gburugburu ebe obibi;
7. Onye na -eme ka ihe ọkụkụ na -ewepụta isi rotter cutter na ezigbo ngwaọrụ iji kpoo ọka site na ikuku jụrụ oyi.
8. A na -ebunye ntụpọ granule site na onye na -ekewa ikuku na ihe nju oyi ma ọ bụ ụdị diski na -ama jijiji.
9. Sistemụ elektrọnikị na -anabata PLC, ihe nlere anya na teknụzụ ntụgharị ugboro iji ghọta njikwa akpaka niile.
Nke gara aga: Ịkwanyere Pipe Production Line
Osote: Sjsz Series Conical Twin Screws Extruder
Extruder ịghasa emeputa
Onye na -eri nri na -akwụ ọtọ
Plastic Extruder ịghasa
Ihe nkedo Extruder
Mpempe akwụkwọ nhazi na ntinye nke ụdị 500 ...
PVC profaịlụ plastik, imepụta bọọdụ na -efe efe ...
Pelletizer onye na -eme ihe nkiri, Na -akụpịa igwe ihe, Onye na -eri nri na -akwụ ọtọ, Nweta Wpc, Line Wepụ profaịlụ Wpc, Onye Wpc Extruder,